October 15, 2021 - Online Hartha
တဈခါသုံး ဝါးတူသုံးစှဲတိုငျး အန်တရာယျမရှိ ဘေးကငျးတယျလို့ထငျနသေေးလား ဖတျကွညျ့ပါ
October 15, 2021 by Online Hartha
ဆိုင်တွေသွားတိုင်းစားနေရတဲ့ တစ်ခါသုံးဝါးတူတွေ မြန်မာနိုင်ငံစားသောက်ကုန်ရောင်းချနေသည့် ဈေးဆိုင်များ၏ ၉၅ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်တွင် ကျယ်ပြန့်စွာ သုံးစွဲနေသော တရုတ်အစားအစာနှင့်ယခုနောက်ပိုင်းယိုးဒယား၊ဂျပန်၊ကိုရီးယားစားသောက်ဖွယ်ရာ၊ ရှမ်းစားစရာများအားလုံးအတွက် စားသောက်ရာတွင် အသုံးပြုနေသော တစ်ခါသုံးဝါးတူ (Chopsticks) သုံးစွဲခြင်းကြောင့်ကူးစက်ရောဂါကင်းစင်နိုင်တယ်။ စားသောက်မှုအတွက်အန္တရာယ်ကင်းတယ်လို့ယူဆလာကြရာကနေတစ်နိုင်ငံလုံးမှာတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်သုံးစွဲလာနေတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အမှန်တော့ တစ်ခါသုံးဝါးတူသုံးတိုင်း အန္တရာယ်ကင်းတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကလည်းကြည့်လိုက်ရင် ဖြူဖြူ၊ဝါကြင်ကြင်အရောင်လေးတွေရှိတဲ့ ဝါးတူကို ဘယ်လိုထုတ်လုပ်ပြီး ဈေးကွက်ထဲမပို့ခင်ဘာတွေသုံးပြီးဘယ်ချွတ်ဆေးတွေသုံးတယ်ဆိုတာမသိကြတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဝါးတူတွေပြုလုပ်တဲ့အခါဝါးတူပြုလုပ်တဲ့စက်ရုံတွေမှာပထမဦးဆုံးဝါးတူအရွယ်အရှည်လေးတွေရအောင်ဝါးတွေကိုဖြတ်တောက်ကြပါတယ်။ပြီးရင်စက်ထဲထည့်ပြီး တူတံအကြမ်းထည်အချောင်းလေးတွေဖြစ်အောင်လေးထောင့်ပုံအချောင်းလေးတွေစိတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီတူတံအကြမ်းထည်လေးတွေကိုခြောက်သွားအောင်အပူခန်းထဲမှာမီးကင်ပါတယ်။ ခြောက်သွားတဲ့တူတံအကြမ်းထည်လေးတွေကိုဖြူသွားအောင်အလွယ်တကူမှိုမတက်နိုင်အောင်လုံခြုံအောင်ဖုံးအုပ်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်၊အလုံပိတ်မှန်လုံခန်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကန့်Sulphurဓာတ်ငွေ့နဲ့ပေါင်းတင်သလိုမျိုးဓာတ်ငွေ့တိုက်ပေးပါတယ်။ အဲဒီလိုကန့်ငွေ့တိုက်တာ၄၈နာရီနီးပါးကြာကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်တူတံလေးတွေအရောင်စွဲနေရာကနေဖြူဖွေးလာပေမယ့်အဲဒီတူတံတွေမှာ ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုက်စွဲကပ်ကျန်နေခဲ့မှာသေချာပါတယ်။ဒီလိုကန့်ငွေ့နဲ့ပေါင်းတင်အရောင်ချွတ်ပြီးသားတူချောင်းပုံအကြမ်းတွေကိုပုံဖော်စက်ထဲထည့်ပြီးပုံဖော်ရပါတယ်။ တူချောင်းပုံသဏ္ဌာန်ပေါ်သွားတဲ့ဝါးတူလေးတွေကိုပြောင်ချော၍လှသွားအောင်အရောင်တင်စက်ထဲထည့်ပြီးရေနံဖယောင်းParaffinနဲ့အရောင်တင်တိုက်ပေးပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာလည်းရေနံချက်ရာကရရှိသောဘေးထွက်အပိုပစ္စည်းရေနံဖယောင်းထဲမှာPolycyclic-aromatic-hydrocarbonဖြစ်တဲ့ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သောဓာတ်တွေပါရှိပါတယ်။ အဲဒီအရောင်တင်ပြီးသားတူတံတွေကိုတော့ပလတ်စတစ်အိတ်တွေနဲ့ထုတ်ပြီးဖြန့်ချိပါတော့တယ်။စက်ရုံတွေမှာဒီလိုတူတံတွေထုတ်တဲ့အခါမှိုတက်ပြီးအရည်အသွေးမမီ အရောင်မည်းညိုနေတဲ့တူတွေကိုစက်ရုံတွေကထုတ်လုပ်မှုစရိတ်အရှုံးမခံနိုင်တဲ့အတွက်Hydrogen-peroxideဆေးရည်တွေပါတဲ့အရည်ထဲထည့်ပြုတ်ပြီးဖြူသွားအောင်လုပ်ကြပါတယ်။ အချို့ဆိုလျှင်ပိုဖြူသွားအောင်Sodium-pyrophosphateတွေပါထည့်ပြုတ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီလိုဓာတုပစ္စည်းတွေသုံးပြီးစီးပွားရေးမျက်နှာတစ်ခုတည်းသာကြည့်ပြီး ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့တူတွေမှာဓာတုကြွင်းကျန်ကပ်ငြိပစ္စည်းတွေကပ်ကျန်နေတာအသေအချာပဲဖြစ်ပြီးတူတံတွေထုတ်လုပ်ကြတဲ့ဘယ်စက်ရုံကမှကြွင်းကျန်ဓာတုပစ္စည်းတွေကို ပြန်လည်သန့်စင်ပေးတာစိတ်ချရအောင်ဆောင်ရွက်တာမျိုးမရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီလိုတူတံတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံနှင့်ကပ်လျက်တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်မှာအများဆုံးတွင်ကျယ်စွာထုတ်လုပ်ပြီး မြန်မာပြည်ထဲကိုဈေးကွက်တင်ရောင်းချနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတင်သွင်းလာတဲ့စားသောက်ကုန်များကိုတော့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှစစ်ဆေးပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အန္တရာယ်ရှိ၊မရှိစစ်ဆေးလျက်ရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်းအစားအသောက်များကိုတိုက်ရိုက်သယ်ယူစားသုံးနေတဲ့တူတံတွေကိုတော့တစ်ခါမှစစ်ဆေးတာမကြားမိပါဘူး။ဒါ့ကြောင့်လည်းနာမည်ကြီးဟိုတယ်ကြီးတွေမှာ စတီးတူတံလေးတွေ၊ငွေတူတံလေးတွေသာချထားပေးတာသတိထားမိပါတယ်။ဒါမျိုးတွေကရေနွေးနှင့်ပြုတ်ပိုးသတ်ပြီးသုံးစွဲလျှင်ပိုအန္တရာယ်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ အခုခေတ်အနေအထားအရနာမည်ကြီးစားသောက်ဆိုင်တွေအပါအဝင်လမ်းဘေးညနေခင်းထွက်ဈေးဆိုင်အဆုံးအထက်ပါဝါးတူတွေကိုနေရာအနှံ့သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့စားသုံးရာမှာ အန္တရာယ်ကင်းတူတံတွေအဖြစ်ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်စွာလက်ခံသုံးစွဲနေကြတာတွေ့နေရသည့်အတွက်တစ်ခါသုံးဝါးတူသုံးစွဲတိုင်း အန္တရာယ်မရှိဘေးကင်းတယ်လို့ထင်နေမယ့်အထင်လွဲနေတာတွေမဖြစ်စေဖို့ရေးသားလိုက်ရပါသည်။ credit Unicode Version ဆိုငျတှသှေားတိုငျးစားနရေတဲ့ တဈခါသုံးဝါးတူတှေ မွနျမာနိုငျငံစားသောကျကုနျရောငျးခနြသေညျ့ ဈေးဆိုငျမြား၏ ၉၅ရာခိုငျနှုနျးကြျောလောကျတှငျ ကယျြပွနျ့စှာ သုံးစှဲနသေော တရုတျအစားအစာနှငျ့ယခုနောကျပိုငျးယိုးဒယား၊ဂပြနျ၊ကိုရီးယားစားသောကျဖှယျရာ၊ ရှမျးစားစရာမြားအားလုံးအတှကျ စားသောကျရာတှငျ … Read more
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာလောက်က #မန္တလေးတိုင်း_ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်ထဲမှာ ငွေတိုးချေးစားတဲ့ သူတော်ကောင်းကြီး တစ်ယောက် ပေါ်ထွက်ခဲ့ဘူး ပါတယ်။ သူ့ကို တစ်နယ်လုံးက ကြည်ညိုလေးစားကြတယ်တဲ့။အခုအချိန်ထိအောင် တသသပြောနေကြတုန်းပါ။ဆရာတော် ပျော်ဘွယ်မြို့ကို တရားတစ်ည သွားဟောတာနဲ့သိခဲ့ရတာပါ။ သူက အတိုးကို အနည်းဆုံး ယူတယ်။ဥပမာ…တစ်ရာ နှစ်ကျပ်တိုးလောက်ပေါ့…ထူးခြားချက်ကတော့ ယာတစ်ကွက်ကို ငါးသောင်းနဲ့ အပေါင်ခံ ထားတယ်။ အဲဒီလယ်ကို လုပ်စားရင်းနဲ့ အရင်းကြေသွားပြီဆိုရင် ပေါင်တဲ့သူကိုခေါ်ပြီး တစ်ခါတည်း ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ် လစဉ်ရတဲ့ အတိုးနဲ့တင် ကျေနပ်လိုက်တဲ့ သဘောပေါ့… သူ့ရဲ့ခြံရှေ့မှာဒီလိုလေးစာရေးထားပါတယ်။စားရေးအတွက်အခက်အခဲရှိရင်စပါးတစ်တောင်းနှင့်_ဆီတစ်ပုလင်း_လူတိုင်းလာယူနိုင်သည်တဲ့။ အိမ်ရှေ့မှာလည်း ဆီကို ရာဝင်အိုးကြီးနဲ့ ထည့်ထားပြီး စပါးကိုတော့ အမိုးလုပ်ပြီး ပုံပေးထားတယ်။စပါးတို့ ဆီတို့ လာယူတဲ့သူကို သူပြောတဲ့ စကားလေးက… ကလေးမ…အပေါ်ယံကြည့်ရင် စပါးတစ်တောင်းနဲ့ ဆီတစ်ပုလင်း ရတဲ့ ကလေးမက ဦးကိုကျေးဇူးတင်ရမှာ။နက်နက်နဲနဲ တွေးကြည့်ရင်ဦးက ကလေးမကို ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ … Read more
သက်ကြီး ပင်စင်စားတစ်ဦးရဲ့ ကိုယ်တွေ့အကြံပေးစကားများ
သင်ပင်စင်စားပြီဖြစ်စေ၊ အလုပ်လုပ် နေသေးသည်ဖြစ်စေ၊ အသက် ၆၀ နီးသူတိုင်း ဒီစာလေးတော့ ဖတ်ကြည့် စေချင်ပါတယ်။ ၁။ ရေဆိုတာ အစုန်ပဲစီးဆင်းပါတယ်၊ အဆန် စီးဆင်းရိုး မရှိပါ။ သားသမီးများ ကို အနားမှာ တစ်သက်လုံးခေါ်ထားဖို့ အားမထုတ်သင့်ပါ။ သူတို့မှာ ယော့က္ခ ထီး ယော့က္ခမ တွေရှိပါသေးတယ်။ သူတို့ အလုပ်တွေ ရှိသေးတယ်။ သူတို့ဘဝတက်လမ်းအတွက် သူတို ရုန်းကန်ရသေတယ်။ သူတို့သားသမီးနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်ကြသေးတယ်။ ၂။ ဒီအချိန်မှာ သားသမီးအပေါ် ချစ်တယ်ဆိုရင် သူတို့ကို ပြဿနာလျှော့ပေးပါ။ စိတ်သဘောထားကြီးပေးပါ။ စိတ်ပျော်အောင်နေပေးပါ။ ကျန်းမာအောင်ဂရုစိုက်ပါ။အပြစ်တင်တာ၊ ညည်းတွားတာ ရှောင်ကျဉ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် လက်ဖြန့်မတောင်းရပါစေနဲ့။ ၃။ အသက်ကြီးလာရင်သုံးဖို့၊ဆေးကုဖို့ အိုစာတော့ လုံလုံလောက်လောက် ချန်ထားသင့်ပါတယ်။ အမွေအကုန်လုံး မခွဲပေးသင့်ပါ။ကလေးနားပြန်တောင်းရင် လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါ။ … Read more
ဟိုတယျအခနျးထဲက လူငယျစုံတှဲ တဈပတျလုံး အပွငျမထှကျလာတော့လို့ ဖှငျ့ကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ….
၂၄နာရီအတှငျး မိုးကွီးရလြှေံမယျ့ ဒသေမြား
၂၄ နာရီအတွင်း မိုးကြီးရေလျှံမယ့် ဒေသများ မုတ္တမပင်ကွေ့အတွင်းမှ low pressure တွေ အားအလွန်ကောင်းလာပြီး မွန်ပြည်နယ် ရန်ကုန်တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်း ၂၄နာရီအတွင်း မိုးများ စွာရွာသွန်းနိုင်ပြီး ၇၂နာရီအတွင်းမိုးကြီးရေလျှံနိုင်ပါတယ်…. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မိုးလေဝသနှင့် ရာသီဥတုအခြေအနေကို ၂၄နာရီလုံး အဆင့်မြင့်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုများမှထောက်လှမ်းကြည့်ရှုနေပြီးတိကျတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ စက္ကန့်မဆိုင်းပဲ ခန့်မှန်းပေးနေပါတယ် လူအများသိရှိစေရန် public ဖွင့်ပြီး share ပေးကြပါ ဟုမ္မလင်း ထမံသီ နန်းယွန်း ခန္တီး ဖားကန့် တနိုင်း ပူတာအို မိုးတွေရွာမယ်နော် မကွေးတိုင်းအနောက်ပိုင်း မိုးများစွာရွာတော့မယ်နော် ချောင်းရေသတိထားကြပါ… ၂၄နာရီလုံး အဆင့်မြင့်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုများမှထောက်လှမ်းကြည့်ရှုနေပြီး ခန့်မှန်းသတိပေးနေပါတယ် အများသိစေရန် public ဖွင့်ပြီး share ပေးကြပါ… ကန်ဆင်မိုးတွေရွာမယ်… 15/16/17 october 2021 ၃ရက်အတွင်း ကချင်ပြည်နယ် … Read more
တံတားပေါ်က ခုန်ချဖို့လုပ်နေတဲ့ ကလေးလေးကို ပြေးဆွဲပီး မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ
ATMစကျထဲ မတျောတဆကဒျဝငျသှားပွီး ပွနျမထှကျလာခဲ့ရငျ ခကျြခွငျးပွနျရမယျ့ နညျးလမျးပါ
ညနေ ၅ နာရီကျော်လောက်က ဈေးဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံလိုလို့ ATM ကဒ်ထုတ်ပါတယ်။ ငွေလည်း ထွက်မလာ၊ ကဒ်လည်း ပြန်ထွက်မလာတော့ လူလည်း ထူပူသွားတယ်။ နီးစပ်ရာဘဏ် ဖုန်းဆက်တော့ အခုက ဘဏ်တွေပိတ်ချိန် ဖြစ်နေတာမို့ မနက်ဖြန်မနက်မှ လုပ်ပေးလို့ရတော့မယ်။စိတ်မပူနဲ့နော်။ မနက်ဖြန် ၉ နာရီခွဲလောက် ကဒ်လာယူတဲ့။သူကသာစိတ် မပူနဲ့ ပြောတာ။ကိုယ်မှာတော့ ဆေးခန်းပြဖို့လည်း ပိုက်ဆံမရှိ။ကဒ်ကလည်း မတော်လို့ ပြန်ထွက်ပြီးငွေပါ ထွက်လာရင် အချောင် ငါးသောင်းက ပါသွားမှာ။ ကဲ အကြံထုတ်စမ်းဆိုပြီး ထွက်လာတဲ့ အကြံ နောက်ဖုန်းတလုံးနဲ့ နီးစပ်ရာ ဘဏ်ဖုန်း ဆက်လိုက်တယ်။ ညီမရေ အကို ညီမတို့ ဘဏ်နားကATMစက်မှာငါးသောင်း ထုတ်တာ သုံးသိန်း ထွက်လာတယ်။ အဲဒါ အကို ATM ကဒ်ထဲမှာ ခြောက်သောင်းပဲ ရှိတာ။ဘယ်လို … Read more
သူတောင်းစားတစ်ဦးလို ဟန်ဆောင်ပြီးသားသုံးယောက်ရဲ့အကျင့်စရိုက်ကို စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ ဖခင်အိုတစ်ဦးရဲ့ ရလဒ်
Liu ဟာ သူ့မှာသား ၃ ယောက်ရှိပြီး သူရဲ့သားများကိုထောက်ပံ့ရန် မြို့သို့သွားပြီး အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Liu ဟာ မြို့မှာပင်ပန်းတဲ့အလုပ်များစွာကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း သားသုံးယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ထိုက်တန်တယ်လို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အပြင်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးနောက် အသက် ၇၀ နီးပါးရှိပြီးဖြစ်တဲ့ Liu ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ယခင်လို့ ပင်ပန်းတဲ့အလုပ်များကိုမလုပ်နိုင်တော့တာကြောင့် Liu ဟာ သူရဲ့ဇာတိမြို့သို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သူ့သားများနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအတူမနေခဲ့ရသလို သားများရဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုသေချာမသိနေတာကြောင့် Liu ဟာ သူ့အပေါ် သားသုံးယောက်ရဲ့သဘောထားကိုစုံစမ်းရန် သူ့ကိုယ်သူ သူတောင်းစားတစ်ဦးလိုဟန်ဆောင်ကာ ရွာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပထမဦးစွာ Liu က သားအကြီးဆုံးရဲ့အိမ်သို့သွားပြီး အကြီးဆုံးသားအား “ သား၊ အဖေပြန်လာပြီ” လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ အကြီးဆုံးသားက သူ့ကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးကြည့်ပြီး စက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မျက်နှာထားနှင့် Liu အား ပြင်းထန်စွာ ထုတ်ကာ သူ့အဖေမဟုတ်ကြောင်း ငြင်းခဲ့တာကြောင့် Liu က သူဟာ … Read more